DivertOS Mobile: Safidy iray hafa mifantoka amin'ny fiainana manokana sy fiarovana | Avy amin'ny Linux
DivertOS Mobile: Safidy iray hafa mifantoka amin'ny fiainana manokana sy fiarovana
Linux PostInstall | 15/04/2022 06:00 | Android
Aorian'ny fotoana mahafinaritra, anio dia hanokana boky vaovao ho an'ny sehatry ny Rafitra fandidiana maimaim-poana na misokatra ho an'ny finday. Noho izany, ny lahatsoratray androany dia natokana ho an'ny safidy mahaliana sy mahasoa fantatra amin'ny anarana hoe "DivestOS Mobile".
DivertOS Mobile Is a tetikasa loharano misokatra izay ny tena tanjona dia ny hanalava ny androm-piainan'ny fitaovana atsahatra, manatsara ny fiainanao manokana ary manome tsotsotra fitomboan'ny filaminanaisaky ny azo atao.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana tanteraka amin'ny lohahevitra anio momba ny Rafitra fiasana ho an'ny fitaovana finday, ary indrindra momba ny "DivestOS Mobile", avelao ho an'ireo liana ireto rohy manaraka ireto ho an'ny sasany Lahatsoratra mifandraika. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"Ny mpamorona ny LineageOS (tetikasa nisolo ny CyanogenMod taorian'ny nandaozan'ny Cyanogeno Inc) dia nanambara vao haingana fa efa namoaka ny dikan-teny vaovao an'ny LineageOS 18.1 (izay mifototra amin'ny Android 11). Ny version 18.1 dia niforona nefa tsy nandalo 18.0 noho ny fametahana quirks ao amin'ny tahiry, miampy, marihina fa ny sampana LineageOS 18 dia nahatratra fitoniana amin'ny fiasa sy ny fitoniana miaraka amin'ny sampana 17, ary ekena ho vonona amin'ny tetezamita hamorona ny dikan-teny voalohany". LineageOS 18.1 dia efa navotsotra ary ireto ny vaovaony
Maru OS tontolo iasan'ny Linux ho an'ny Android
Mobian: Rafitra fiasa finday mifototra amin'ny Debian GNU / Linux
1 DivertOS Mobile: Fanohanana bebe kokoa miaraka amin'ny fiainana manokana sy fiarovana
1.1 Inona no atao hoe DivOS Mobile?
1.3 Top 15 rafitra miasa maimaim-poana na misokatra ho an'ny finday efa misy
DivertOS Mobile: Fanohanana bebe kokoa miaraka amin'ny fiainana manokana sy fiarovana
Inona no atao hoe DivOS Mobile?
Araka ny anao tranokala ofisialy, ity tetikasa ity dia mamaritra ny tenany toy izao manaraka izao:
"DivestOS dia tetikasam-pientanentanana notohanan'i Tad (SkewedZeppelin) irery ihany nanomboka tamin'ny taona 2014. Manana tanjona maro izy, fa voalohany indrindra: hanitatra ny fiainan'ireo fitaovana najanona, hanatsara ny fiainana manokana ny mpampiasa, ary hanome fiarovana maotina raha azo atao.".
Ankoatr'izay, ny developer manazava ireto manaraka ireto momba ny asanao miaraka amin'ny DivertOS Mobile:
"Ny fitaovana tohanan'ny DivertOS dia tsy maimaim-poana tanteraka (tahaka ny any an'ala) ary maro ny olana ara-piarovana izay tsy azontsika vahana (blobs/firmware proprietary). Fantatsika tsara ihany koa ny fomba fiasa "eny amin'ny lalamby", na izany aza, ny fahombiazana lehibe omen'ny vahaolana "80%" no tena amaritanay izany fa tsy mijanona fotsiny ary tsy manao na inona na inona. Mino an-kitsim-po izahay fa ny zavatra atolotry ny DivestOS dia zavatra hafa amin'ny tetikasa hafa rehetra, indrindra amin'ny lafin'ny tetikasa sy ny fikirizanay. Manantena izahay fa hahita tombony amin'ny voankazonay ianao, ary mampahatsiahy anao izahay mba hifalifaly amin'ny fampiasana azy!".
DivestOS dia fork malefaka tsy ofisialy an'ny LineageOS.
Efa nisy hatramin'ny 31/12/2014 izy io, rehefa navoaka ampahibemaso ny sary fanaony voalohany. Izay niorina tamin'ny CyanogenMod 12, ary azo ampiasaina amin'ny fitaovana dimy fotsiny. Mandritra izany fotoana izany, andro vitsivitsy taty aoriana, efa nanana ny sariny voalohany miorina amin'ny CyanogenMod 12.1 azo alaina izy.
Amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny version 18.1 izay navoaka tamin'ny 3 aprily 2022.
Manana fifantohana mafy amin'ny fampiasana rindrambaiko sy singa malalaka sy malalaka (FOSS) izy.
Izy io dia nampihatra rafitra fiasa isan-karazany sy fanamafisana kernel, fanatsarana ny fiainana manokana ary paty CVE.
Ahitana famafana mandeha ho azy ireo blobs fananana tsy ilaina.
Manana fahafahana manidy indray ny bootloader amin'ny fitaovana tohana izy io, ary baotin'ny fanamarinana amin'ny fitaovana tohanana.
Tsy manana fanohanana faka, fa mampihatra SELinux foana ary mampiasa encryption amin'ny alàlan'ny default.
Ahitana fanavaozana isam-bolana, fanavaozana OTA Delta, ary fanavaozana OTA amin'ny alàlan'ny Tor (tsy voatery).
Izy io dia miaraka amin'ny F-Droid tafiditra ao.
Ankoatra izany, dia tsara ny manamarika fa ao amin'ny raharaha manokana, ahitana: a pGet tracker blocker, a mpitety tranonkala miompana amin'ny fiainana manokana mifototra amin'ny Firefox, sy ny fampiharana Mangina (Silence), izay sampanan'ny famantarana ho an'ny SMS ihany, izay manolo ny fampiharana AOSP default amin'izany. Ary farany, amin'ny lafiny fiarovana, ankoatry ny zavatra maro, dia misy ny fampiharana Hypatia, izay loharanom-baovao misokatra tena misy malware scanner ho an'ny Android.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny DivertOS Mobile Afaka mitsidika ireto rohy manaraka ireto ianao: GitLab, GitHub, ny fizarana ny Fanontaniana napetraka matetika (Faq) raha te hahalala lalindalina kokoa, ny antsipiriany momba ny zavatra takinao, ary ny fitaovana ankatoavina na atolotra ny fampiasana azy. Ary ny azy fizarana ara-teknika hanamafisana ny rafitra sy ny fivoarany.
Top 15 rafitra miasa maimaim-poana na misokatra ho an'ny finday efa misy
AOSP (Tetikasa Android Open Source)
KAIOS (Loharano misokatra ampahany ihany)
Raha tsorina "DivestOS Mobile" Izy io dia safidy tsara ho an'ny Operating System ho an'ny fitaovana finday Google, izany hoe an'ny Android. Antenaina fa hitombo sy hivoatra hatrany izany, mba ho azo ampiasaina amin'ny solosaina maro kokoa, na efa lany andro na maoderina. Mandritra izany fotoana izany, dia manolotra ny mpampiasa fanatsarana ny fiainana manokana sy seguridad. Ary amin'ny ankapobeny, ireo safidy hafa rehetra amin'ny Mobile Operating Systems, ho tombontsoan'ireo rehetra izay manome lanja tsy ny malalaka sy misokatra ihany, fa koa ny fiainana manokana, ny tsy mitonona anarana ary ny fiarovana ny solosaina tsara kokoa amin'ny fitaovantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Android » DivertOS Mobile: Safidy iray hafa mifantoka amin'ny fiainana manokana sy fiarovana
GNU Coreutils 9.1 dia tonga miaraka amin'ny fanatsarana, fanamboarana ary maro hafa
Ao Fedora dia mikasa ny hanolo ny DNF amin'ny Microdnf izy ireo